"Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny halehiben'ny hery, fa tsy ho avy aminay" — 2 Kôr. 4:7.
Efa napetraka ny fanontaniana manao hoe karazana vilany tany inona no azon'ny Fanahy ampiasaina? Inona no voalazan'i Kristy? "Mankanesa aty amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana. Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo hianareo. Fa mora ny ziogako, ary maivana ny entako" - Mat. 11:28-30. Karazana vilany tany inona no azon'ny Mpampianatra ampiasaina? Vilany tany madio. Rehefa diovintsika amin'ny fahalotoana rehetra ny fanahy dia vonona ny hampiasaina isika.
Efa nofoanantsika ve ny izaho? Efa sitrana amin'ny fikasana feno fitiavan-tena ve isika? E, raha mba tsy variana amin'ny tenantsika mantsy isika! Hanadio ny olony, ny mpampianatra ary ny fiangonana anie Andriamanitra! Efa nomeny ny fitsipika ho fitarihana ny zavatra rehetra, ary avy amin' izany dia tsy tokony hisy fisintahana tsy amim-piheverana. Kanefa nisy ary mbola misy ny fialana amin'ireo fitsipika marina. Mandra-pahoviana no mbola hisy izany toe-javatra izany? Fomba ahoana no ahafahan'ny Mpampianatra mampiasa antsika ho toy ny vilany tany ho an'ny fanompoana masina, raha tsy manadio ny tenantsika isika ary manome toerana ny Fanahiny hiasa?
Miantso ny olony hanambara Azy Andriamanitra. Hampiseho ireo fitsipiky ny fahitsiana izay tsy tandrovin'ny fiangonana akory ve izao tontolo izao? Moa ve tsy miorina eo ambonin'ny fanorenana marina, dia i Jesosy Kristy ireo fitsipika lalainy? Karazan-javatra toa inona no apetratsika eo ambonin'izany fanorenana izany, ka tsy hisy intsony ny fankahalana fa firaisan-kina no ho ao am-piangonana? Hitondrantsika hazo, ahitra maina ary mololo ve izany? Sa hitondrantsika kosa zava-tsarobidy toy ny volamena, volafotsy ary vato sarobidy? Tsy haintsika ve ny manavaka ny tsimparifary sy ny vary? Tsy tsapantsika ve fa tsy maintsy mandray ny Fanahy Masina ao am-po izay afaka hamolavola sy hamboatra izany isika?
Miaina ao anaty andro mahory isika. Noho ny fahatahorana an'Andriamanitra dia hiteny aho fa ilaina ny fanehoana marina ny Soratra Masina mba hisian'ny fivelarana ara-moraly marina eo amin'ny toetra. Rehefa iasan'ny Fanahy ny saina sy ny fo, rehefa maty ny izaho, dia afaka mivelatra tsy ankiato sy manomboka miroborobo ny fahamarinana. Rehefa mamolavola ny toetsika ny fahamarinana, dia ho hita fa tena fahamarinana tokoa izany. — RH, 28 Febroary 1899.